XOG: A/Madoobe oo amray Ciidanka J.land in ay dagaal u diyaar-garowbaan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: A/Madoobe oo amray Ciidanka J.land in ay dagaal u diyaar-garowbaan
XOG: A/Madoobe oo amray Ciidanka J.land in ay dagaal u diyaar-garowbaan
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu amray in ay heegan iyo feejignaan dheeri ah galaan ciidamada daraawiisha maamulka Jubbaland, maadama uu jiro isbedel dhanka maamulka ah oo ku dhacay ciidanka maamulkaas.
Madaxweynaha ayaa xilkii ka qaaday Wasiirkii amniga Jubbaland C/rashiid Janan oo la sheegayo inuu u wareego dhanka Dowladda Federaalka, maadama uu heshiis la galay madaxweyne Farmaajo.
Sida aan xogta ku helnay, Axmed Madoobe oo hadda shir u joogo Muqdisho ayaa ku amray saraakiisha ciidanka in isku diyaariyaan dagaal kaga soo wajahan dhanka Dowladda Federaalka ciidankeeda ku sugan gobolka Gedo oo lagu damacsan yahay in lagu weeraro deegaano iyo degmooyin ka tirsan Jubbada Dhexe oo Al-Shabaab heystaan.
Wararka qaar oo soo baxaya ayaa sheegaya in , Ujeedka C/rashiid Janan loola heshiiyay ay tahay sidii Dowladda Federaalka ay u qabsan laheyd caasimadda Jubbaland ee Bu’aale oo ku jirta gacanta Al-Shabaab si halkaas maamul cusub oo ka madax banaan midka Kismaayo loogu yeeaglo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dadaal xooggan ku bixiyay sidii uu meesha kaga saari lahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo in ka badan 7-sano xilkaas haya.